Transmission Tower Manufacturers - China Transmission Tower Factory, Suppliers
kona yesimbi shongwe
chiedza chezuva mumugwagwa
Kudhonza Type 2x100KN Tensioner
Kudhonza Ttype 280KN Puller
Kunze Mwenje 20m 25m 30...
Kunze 5m 6m 7m 8m 9m 10m ...
35kV Hot Galvanized Steel Tube Tower
Tsvaga pano, hombe yekufambisa shongwe inogadzira kutengesa uye exporeter yekumaodzanyemba china.kubvunza ikozvino!
35kV Steel Pipe Tension tower
Tsvaga pano, hombe yekutakura shongwe inogadzira kutengesa uye exporeter yekumaodzanyemba china, inyanzvi mukugadzira galvanized angle simbi uye simbi pombi kugadzira,kubvunza ikozvino!
110kV Imwe Tube Tower
China mugadziri & mutengesi kunze kwe10kV ~ 500kV yakakwira voltage shongwe uye chimiro chesimbi, ISO certified bhizinesi, China fekitori yakananga, kubvunza izvozvi!
110kV/132kV Galvanized Steel Monopole Tower
strain tower inzira yakajairika yesimba remagetsi ekufambisa shongwe.
1.we tinogadzira chigadzirwa maererano nezvinodiwa nemutengi kana tsanangudzo.
2.product yemhando yakakwira zvakanyanya, yakapfuura ISO 9001 Quaility Management System.
3.galvanized level yakasvika pasi rose advanced level;anticorrosion garandi makore makumi maviri kusvika makumi matatu.
110kV Steel Lattice Tower
steel lattice tower ndiyo yakajairika maitiro emagetsi ekufambisa shongwe.
132kV Angle Steel Tower
TRANSMISSION LINE TOWER 132kV ANGLE STEEL LATTICE TOWER DESIGN SECIFICATION Urefu Kubva 10M-100M kana zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi Sutu yeMagetsi Power Transmission uye Distribution Shape Polygonal kana Conical Material Kazhinji Q235B/A36, Yeild♑）Yeild 345MMP , Yeild 3452MP pamwe neHot Rolled coil kubva kuASTM572, GR65, GR50, SS400 Power Capacity 110kV/132kV Kushivirira kwedimension Maererano nezvinodiwa nemutengi Sur...
330kV Kaviri Loop Y-mhando Transmission Tower
Tarisa pano, makore gumi eKunaka, Akapfuma mhiri kwemakungwa ruzivo rwekutumira kunze, Kunyanya mukufambiswa kwetambo shongwe, telecommunication tower uye magetsi substation chimiro,wana contact details izvozvi!
330kV Imwe Loop Y-mhando Transmission Tower
500kV Transposition Tower
Power line tower inogadzira, China ISO yakasimbiswa bhizinesi, dhizaini yehunyanzvi uye mutengo wemakwikwi,Quote izvozvi!
500kV Termianl Tower
China mugadziri & mutengesi kunze kwe10kV ~ 500kV high voltage tower yekufambisa magetsi uye kugovera, ISO certified bhizinesi, China fekitori yakananga, kubvunza izvozvi!
500kV DC Kaviri Circuit Angle Steel Tower
Head Factory:Nhamba 528, West Section, Liutai Avenue, Chengdu, China